Umshini we-ATC wood cnc router
Izinkuni cnc router router
Ithuluzi elisha le-Design R8 Auto Shintsha imishini yekhabethe lomnyango wezinkuni
Uma ufuna ukukhiqiza iminyango yokhuni, amakhabethe, amakhabethe nefenisha yamapaneli eyahlukahlukene, sicela uthole ngomshini wethu we-R8 Auto Tool Shintsha umshini wokhuni. Lo ngumshini wethu wamuva osebenza ngezinkuni osebenza ngezinto eziningi. Lo mshini usebenzisa ukucushwa okuphezulu. Ukugqamisa kwayo okukhulu ukuthi inethuluzi m ...
Inani elikhulu lemishini yokubaza ehanjiswa ngoDisemba
Amasethi ayi-9 asetha imishini ye-cnc cnc aqedile futhi alayishe efektri yethu Umenzeli wethu wayala amasethi ayi-9 1325 imishini yezinkuni, Futhi sase siqedile ukuyilayisha le mishini efektri yethu. Sineminyaka engu-12 umkhiqizi womshini wokunciphisa umshini Imishini yethu ithunyelwa ezweni lonke, sine-sal ...
Thola izibuyekezo ezinhle ezivela kumakhasimende
Thola ukubuyekezwa okuhle kumakhasimende Ikhwalithi ephezulu iyimpilo yebhizinisi, ubuchwepheshe obusha buyisisekelo sebhizinisi, ukuqamba kuyisihluthulelo senqubekelaphambili yebhizinisi, insizakalo enhle yokuthengisa izothola imakethe ebanzi yenkampani. Inkampani iyakhokha ...
Abasebenzi efemini basebenzisa imishini ukwenza amasampula ezingxenye ezingabonakali
Abasebenzi efektri basebenzisa umshini ukwenza amasampula ezingxenye ezingabonakali Umshini wokusika isikhungo seLamino umshini okhethekile osetshenziselwa ukusika nokugxoba ifenisha eyenziwe ngokwezifiso. Kungaba balahle bendabuko inhlukano ahlabayo imodi futhi sincike zabasebenzi. Kungaba ngokoqobo ...
Umshini uyahlanganiswa uthunyelwe
Umshini uyahlanganiswa futhi uyathunyelwa Isimo sezulu sanamuhla sihle kakhulu, ilanga likhanya, umoya libalele, nekwindla kucacile. Amakhasimende amaningi eza ukuvakashela imboni yethu ngokulandelana. Abasebenzi basefemini bamatasa nomsebenzi wabo kokuthunyelwe kwabo. Uyabona, abasebenzi ...
Le nkampani ngokuhlanganyela yavakashela iTai'an Rift Valley
Inkampani ngokuhlanganyela ivakashele iTai'an Rift Valley Izolo, isimo sezulu besikahle, inkampani yethu bonke abasebenzi bahamba bayohambela iTai an. Ekuseni, sivakashele ingadi kabhiya, lapho besazi khona ukuthi kwenziwa yini ubhiya nokuthi ulungiswa kanjani igxathu negxathu. Umshini omkhulu ...
Umshini wokusika we-CNC, owaziwa nangokuthi imishini yefenisha yokukhiqiza ifenisha ehlakaniphile. Njengoba igama lisho, zonke izinqubo ezivela ekulayisheni, ekusikeni, ekubhobozeni imbobo mpo nasekuvalweni kwepuleti kuqediwe ngokuhamba okukodwa. Ibeka ngokuphelele ukukhiqizwa nokusebenza okwenziwa ngesandla. Ngakho-ke, yini le ...
I-JCUT CNC ulwazi lomshini wokugcina umshini
Inkinga yendabuko yilena: 1. Umshini wokuqopha ongakaze unakekelwe: isilayidi somzila wesitimela sonakaliswe kakhulu, isivinini somshini sihamba kancane, umphumela womsebenzi awumuhle, impilo yomshini ayiyinhle, i-axis ye-Z inamathele iphutha likhulu, futhi i-angle yokukhetha ayisihle! UDkt ...
I-R9 uchungechunge umshini wokushayela we-R9 uchungechunge lwe-CNC umshini wokushayela: Umkhakha osebenzayo womshini: ukusika i-slot punch kungasetshenziselwa ukucubungula ibhodi yohlobo lwefenisha ehambisa ukumodela ukucubungula ikhabethe umnyango wekhabethe umnyango umnyango othambile iphakethe langempela umnyango wangaphakathi wokhuni ifenisha yekhompyutha. R7 uchungechunge CNC ...
UKUBONISANA NGAMAHHALA +8618006360664
UKUBONISANA NGAMAHHALA +8615863173380